Creative Writing » ​နေ၀န်းနီ နဲ့” အ​ကောင်းမမြင်​ “ဝါဒ	13
​နေ၀န်းနီ နဲ့ “အ​ကောင်းမမြင်​” ဝါဒ ​နေ၀န်းနီ တစ်​​ယောက်​ ခုတစ်​​လော ဖြစ်​​နေတာက မြင်​မြင်​သမျှ အ​ကောင်းမမြင်​တတ်​တာပဲ ။ အဲ့ဒါ ​ရောဂါ တစ်​ခုလား ။ ​ရောဂါ ဆိုရင်​လည်း ​ရောဂါ ​ပေါ့ဗျာ ။ ခင်​ဗျားတို့ ​ပြောသလို ပလပ်​ကျွတ်​တယ်​ ​ပြောလဲ ခံရမှာပဲ ။ ပတ်​၀န်းကျင်​မှာ ​နေ့စဉ်​​တွေ့မြင်​​နေသမျှ အရာရာဟာ ကိုယ်​နဲ့ အံဝင်​ခွင်​ကျ မရှိတာက ဆိုးလွန်းတယ်​ ။ လူ​တွေကြားမှာ​နေပြီး တစ်​​နေ့ထက်​တစ်​​နေ့ ဆိုးဝါးလွန်းစွာ အထီးကျန်​ဆန်​​နေတယ်​ ။ အနီးပတ်​၀န်းကျင်​မှာ ကိုယ်​နဲ့ အမြင်​တူ သူကလည်း လက်​ချိုး​ရေတွက်​ကာမှ သုံး​ယောက်​မပြည့်​တတ်​​လေ​တော့ ကိုယ်​မှာ ရင်​ဖွင့်​စရာရှားပါးမှုကို အခွင့်​​ကောင်းယူ ​နေပြီး ဒီမှာလာလာပြီး ပို့စ်​တင်​​နေရတာလည်း အားနာတယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့ တစ်​ခြား​နေရာ သွားတင်​ရင်​လည်း ဒီ​ကောင်​ကြီး ​ဂေါက်​​နေပြီ အ​ပြောခံ ရမှာလည်း စိုးသဗျ ။ ​နေ၀န်းနီ က ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ အားမနာတမ်း ​ဝေဖန်​ ဆန်းစစ်​တတ်​တယ်​ ။ ဒါမှ တစ်​ခြားသူ ​ဝေဖန်​တိုက်​ခိုက်​လာရင်​ အချက်​ကျကျ ပြန်​လည်​​ချေပ နိုင်​မှာမဟုတ်​လား ။ ဒီ​တော့ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ ​ဝေဖန်​ပါတယ်​ ။ ဆန်းစစ်​ပါတယ်​ ။ မြင်​မြင်​သမျှ အ​ကောင်းမမြင်​တာကလည်း မ​ကောင်းဘူး မဟုတ်​လား ။ အ​ကြောင်းအရာ အားလုံးချုပ်​​ပြောလို့မဖြစ်​ဘူး ။ ဖတ်​​နေရင်းရှုပ်​​ထွေးသွားနိုင်​တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ ဘာ​တွေ အ​ကောင်းမမြင်​နိုင်​တာလဲ ။ ဘာလို့ အ​ကောင်းမမြင်​နိုင်​တာလည်း တစ်​စ စီ ရှင်းသွားမှ လင်းမယ်​ ။ ​ပြောပြီးပြီ​နော်​ ။ ​နေ၀န်းနီက ကိုယ့်​ဖာသာကိုယ်​လည်း အားမနာ တမ်း​ဝေဖန်​ဆန်းစစ်​တတ်​သလို သူတစ်​ပါးကိုလည်း ညှာ​နေမယ်​မထင်​နဲ့ ။ ခု​တော့ အဲ့ဒိလို ​ဝေဖန်​ဆန်းစစ်​တတ်​​အောင်​ သင်​​ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာသမား​တွေနဲ့ ဖတ်​ခဲ့မိခဲ့တဲ့ ​လေ့လာခဲ့တဲ့ ကျမ်း​တွေကိုပဲ အပြစ်​တင်​ရမလား ။ ပြုလုပ်​မြဲ ပြုလုပ်​ဆဲ လူ​တွေကပဲ ဓ​လေ့ ထုံးတမ်းစဉ်​လာ​တွေ ဖက်​တွယ်​လွန်း​နေသလား ။ ခင်​ဗျားတို့လည်း ​ဝေဖန်​ဗျာ အားနာဖို့မလိုဘူး ။ နံပါတ်​ တစ်​ စ​ပြောမယ်​ ။ ခင်​ဗျားတို့ပတ်​၀န်းကျင်​မှာလည်းရှိ​နေမှာပဲ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆို​တော့ ဘာသာ​ရေးနဲ့ ပတ်​သက်​​နေတယ်​ ။ ပတ်​သက်​​နေတယ်​သာ ဆိုတာပါ ။ ​နေ၀န်းနီ က​တော့ ဘာသာေ ရးနဲ့ မဆိုင်​တဲ့ အပိုအလုပ်​လို့မြင်​​နေတယ်​ ။ အဲ့ဒါက ခင်​ဗျားတို့လည်း ကြုံ​နေရမှာပဲ ။ ​ကျောင်းပိတ်​ချိန်​​ရောက်​လာပြီဆို​တော့ က​လေးရှင်​ပြုပွဲ​တွေပါ ။ က​လေး​တွေ ရက်​ရှည်​ ​ကျောင်းပိတ်​ရက်​မှာ သာသနာ​ဘောင်​ သွတ်​သွင်း​ပေးတဲ့ ပွဲ​တွေ​ပေါ့ ။ ​နေ၀န်းနီ သ​ဘောမကျတာက​နေပူ​ကောင်းတဲ့ အချိန်​ ​နေ့လည်​ နှစ်​နာရီ သုံးနာရီ​လောက်​ရှင်​​လောင်းလှည့်​တဲ့ ကိစ္စ ကိုယ်​နဲ့လည်း ဘာမှမဆိုင်​ဘူး​နော်​ ။ ကိုယ်​လည်းလိုက်​လှည့်​ရတာမဟုတ်​ဘူး ။ ​နေ၀န်းနီလို အာပလာ​ကောင်​ကို သူတို့ကလည်း မဖိတ်​ပါဘူး ။ အဲ့ဂလို လုပ်​မှ သာသနာ​ဘောင်​ က လက်​ခံမယ်​လို့များ ဘုရားက​ဟောခဲ့သလား လက်​လှမ်းမှီ သ​လောက်​ ရှာဖတ်​ကြည့်​ပါ​သေးတယ်​ ။ မ​တွေ့ဘူးဗျ ။ ​နောက်​ ​နေ၀န်းနီနဲ့ စိတ်​သ​ဘောတူတဲ့သူ သုံး​ယောက်​​လောက်​ကိုလည်း ​မေးကြည့်​ပါ​သေးတယ်​ ။ သူတို့ကလည်း ဟင်းအင်းတဲ့ ။ တစ်​​ယောက်​က ​ပြောလိုက်​မှ ဒီစာကို ဖြစ်​သွား​တော့တာ ။ သူက ပြန်​​မေးတယ်​ ။ သား​တော်​ရာဟုလာကို ဘုရားရှင်​က သာသနာ့​ဘောင်​ ဘယ်​လိုသွင်းလိုက်​သလဲတဲ့ ။ ​နေ၀န်းနီ ဖတ်​ဖူးသမျှ စဉ်းစားကြည့်​တယ်​ ။ ​ရေး​ရေး ​ပေါ်လာတာက သင်္ကန်း​တောင်းနဲ့ ရှင်​ကျင့်​ဝတ်​သင်​​ပေးပြီး သရဏဂုံ တိုင်​​ပေးပြီး သင်္ကန်းဆီး​ပေးလိုက်​တာပဲ ။ အတိအကျမှတ်​မိတာက သား​တော်​ရာဟုလာ အသက်​က ခုနှစ်​နှစ်​ ။ ဒါအသက်​သတ်​မှတ်​ချက်​ပါ ​ပေးခဲ့တယ်​လို့လည်း ​ပြောလို့ရတယ်​ ။ ခုနှစ်​နှစ်​ ထက်​ငယ်​ရင်​ ဘာဖြစ်​တယ်​ ညာဖြစ်​တယ်​ သူကဆက်​​ပြော​နေ​သေး။ တစ်​ကယ်​လို့ဗျာ ခု​ခေတ် လိုပဲ ​ ရှင်​​လောင်းလှည့်​တယ်​ ဆိုတာ ၀င်းခင်းတယ်​ဆိုတာ ဘုရားရှင်​က ခွင့်​ပြုမယ်​ဆိုရင်​ ​တောင်းဆိုခဲ့ရင်​ သား​တော်​ရာဟုလာရဲ့ ရှင်​ပြုပွဲ က ခုလူ​တွေ လုပ်​​နေတာကို ပျင်း​သေးတယ်​​ပြောရမှာ​ပေါ့ ။ နှစ်​ဘက်​ ဘိုးဘွားက နှစ်​နိူင်​ငံ အုပ်​ချုပ်​​နေတဲ့ ရှင်​ဘုရင်​​တွေ ။ ၀င်းလှည့်​မယ့်​ မူးမတ်​​တွေကလည်း ခုလို ဟန်​ပြမဟုတ်​ဘူး ။ တစ်​ကယ့်​ တိုင်းပြည်​ရဲ့ မူးမတ်​အစစ်​​တွေ ။ စစ်​သည်​​တွေက​ကော တစ်​ကယ်​ အစစ်​​တွေ ။ ​နောက်​ ဆင်​​တွေဗျာ နှစ်​ပြည်​​ထောင်​​ပေါင်းလိုက်​ရင်​ နဲမှာမဟုတ်​ဘူး ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဘုရားရှင်​က အဲ့ဒိလိုမလုပ်​ခဲ့ပါဘူး ။ အဓိက ပြုဖွယ်​ကိစ္စ ​တွေကိုပဲ ​ဆောင်​ကျဉ်းပြီး ဒီနည်းနဲ့ သာသနာ့​ဘောင်​ သွတ်​သွင်းရတယ်​လို့ နမူနာပြခဲ့ ပြီးသားပါ ။ ခုလူ​တွေလုပ်​​နေတာက ​ငွေကုန်​သံပြာ ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး ။ ဘုန်းကြီး​ကျောင်း​တွေကလည်း အလှူ​ငွေ များများလာမဲ့ ဒါယကာကို မဆန့်​ကျင်​ဘူး “ဒါဒီလိုလုပ်​မယ်​ဘုရား ” လို့ ​လျှောက်​လိုက်​ရင်​ “​ကောင်းတာ​ပေါ့ ဒကာ​တော်​ ” ဖြစ်​ကုန်​ပြီ ။ ဗုဒ္ဓ နည်းကျ ။ ဘုရား ကြိုက်​မလိုက်​​တော့ဘူး ။ ဒါယကာကြိုက်​ ဖြစ်​သွားပြီ ။
​အော်​ ကိုယ်​လိုလူ ရှိ​သေးတယ်​လို့ ​တွေးမိ​ပေမဲ့ တစ်​​ယောက်​ထဲ ဖြစ်​​နေတယ်​ ။ ဒါ ဘယ်​က ဆင်းသက်​လာတာပါလို့ ​ပြော​နေရင်​လည်း ကိုယ့်​ဘက်​ကလူ အသုံးမကျတာ တစ်​ဘက်​သားကိုနှိပ်​ကွပ်​သလို ဖြစ်​​နေမှာ စိုးလို့မ​ပြော​တော့ပါဘူးဗျာ ။ ​နေ၀န်းနီ က​တော့ အဲ့ ကိစ္စ ကို ဘယ်​လိုမှ အ​ကောင်းမြင်​လို့မရပါ ။ သက်​သက်​ အပို​ဆောင်း ရူးသွပ်​မှု တစ်​ခုလို့ပဲ မြင်​​နေတယ်​ ။ ခင်​ဗျားတို့​ကော ¿¿¿¿ …………. ​နေ၀န်းနီ About naywoon ni
kai says: ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်က.. တိုင်းပြည်.. ပြည်ထောင်ဆိုတာ.. အခုခေတ်.. မြို့နယ်တခုစာလောက်တွေအများကြီးဗျ…။ သေးသေးလေးတွေ..။
လောကီတိုင်းပြည်ကျဆုံးဖို့လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: မကြိုက်တဲ့ အဓိက တော့
Alinsett@Maung Thura says: ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး
ခင်ဇော် says: ကိုယ့် အလုပ်မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတဲ့သူတွေ မြင်ပြီး ရှက်ရကြေး ဆို
sorrow says: အဘနီပို့စ်မှာ မဆိုင်တာလေးဝင်မန့်ပါအုံးမယ်… ကျော် ပဲ ဒီတိုင်းပြည်မှာနေပြီး အကောင်းမမြင်တတ်တာပဲနေမှာပါ…သွသူတောင်းစားတာဆိုပေမယ့် ..
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟုတ်တယ်ဘနီ
naywoon ni says: ဟာ ဟ ဘာသာ​ရေးနဲ့ ပတ်​သက်​ရင်​ လက်​​ရှောင်​​နေကြမယ်​ ထင်​​နေတာ ×××× အများကြီးပဲ အများကြီး ကိုယ်​လိုလူ​တွေ အများကြီး
Ma Ma says: လောကုတ္တရာ ဘာသာရေးဘက်နွယ်ပြီး လူ့စွမ်းအားတွေ အလုပ်အကိုင် ပါဝါတွေ အင်အားတွေ သုံးနေတယ်ဆိုပေမယ့်….
အဘနီဆက်ရေးမှာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသားးးး်း
padonmar says: အဘနီဖက်မှာ ရှိပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ပက်သနှာက အဟုတ်ထင်တာ.. အဟုတ်ထင်တော့ အရှိယူတယ်.. အရှိယူတော့ အစွဲပြုတယ်.. အစွဲပြုတော့ အစဉ်အလာ ဖြစ်သွားရော။ အစဉ်အလာဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ ဟုတ်စ.. ရုန်းမီထွက်နိုင်တော့ဘူး။ မရှိဘူးလား ရှိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ရှိတယ်ဆိုပီး ယူလိုက်ချိန် မရှိတာကို ရသွားတာ လက္ခဏာသုံးပါး တွင်တွင်သုံးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်တျန့်များ မေ့လျော့ကုန်တယ်။ ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားခြင်း သဘောကို နားမလည်… ပြောလိုက်လျင်တော့ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ပါးစပ်က မချ..။
naywoon ni says: အဲ့​တော့ အစဉ်​အလာ ဖြစ်​ပျက်​ ဖြစ်​ပျက်​​ပေါ့ဗျာ
ကွင်းစ ဖြစ်​ပျက်​ ဖြစ်​ပျက်​ကို ဖြက်​ပစ်​ ဖြစ်​ပြစ်​လို့ မဖတ်​ရ ကွင်းပိတ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .Totally agree with you Ko Ni .ကျုပ်သားကိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းခေါ်သွားပီး ကတုံးတုံး၊ သင်္ဃာန်းစည်းပေးလိုက်တာပဲ
Mr. MarGa says: အဲ့ အိုင်ဒီယာကို အမျိုးတွေရှေ့ ပြောချင်တာ ပါးစပ်ကို ယား နေတာပဲ